MTS Converter - Sida loo rogo ama MTS in ku dhawaad ​​qaab kasta oo ku Mac / Windows
> Resource > Beddelaan > MTS Converter - Sida loo rogo ama MTS in ku dhawaad ​​qaab kasta ee Mac / Windows
Wondershare MTS Converter - Video Converter waa u fududahay in la isticmaalo video diinta software. Waxay awood u aad si loogu badalo ama fiidiyo camera files qaab MTS in video in AVI, wmv, MP4, MKV ama qaab kale oo caan ah oo file. Saaridda Audio ayaa sidoo kale taageeray. Tani xirfad video Converter siinayaa filan taageerayo qalabka sida Apple iPhone / iPad / iPod, Sony PSP / PS3, telefoonada Android sida HTC iyo in ka badan.
1 Import MTS files in this video MTS Converter
Marka hore, soo dejinta MTS files ka fiidiyo ama kamarad si aad u computer. Next, ordo this Converter MTS ka dibna tag "Beddelaan" tab> "Add Files" menu in ay dajiyaan files MTS ka kombiyuutarka.
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in arbushin ilaa liiska qaab hoos-hoos, halkaas oo aad ka dooran kartaa qaab kasta ama aalad aad rabto in aad si loogu badalo aad files MTS in.
3 Edit MTS video files (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in aad wax ka bedel ama retouch aad files footage MTS, sida miraha beeraha, kala, midowdo videos iyo darto saamaynta video iwm, oo aad si toos ah u isticmaali kartaa hawlaha tafatirka this app ee.
Dalagyada: jiid sanduuq dhibcaha qaab ay doortaan deegaanka shaashadda fiidiyow aad rabto in aad ka. Kolkiiba, waxaad arki saamayn video ballaadhisay muuqaal furmo Falanqeynta xaq karo.
Jar: Jiid jeedi labada sliders hoose si ay u doortaan qeybta aad rabto, ka dibna ku dhuftay maqas icon iyo button OK. Sidaas, waxaad ka saari kara clip kasta oo aadan rabin.
Watermark: Ku dar image ama text watermarks si aad video shakhsi.
Saamaynta: siiyaan daraasiin saamaynta qabow oo aad codsan kartaa in video ah.
Cinwaan: darista files Cinwaan la oggol yahay ay barnaamijkan.
3 diinta Start MTS
Hit ah "Beddelaan" button ee midigta hoose geeska of this MTS gacanta Video Converter 's interface si loogu badalo files MTS. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa app tani waxaa la bilaabo diinta aad MTS video files leh soo bandhigay bar horumarka cagaaran. App Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ku dhameysan diinta video daqiiqado yar ka dib.
Ka dib markii ay diinta ka, kaliya riix "Open Folder" doorasho hoose ee interface this MTS Converter ee si aad u ogaato faylasha saarka Raaxo ah.
Qaababka ugu muhiimsan ee MTS Converter
Faa'iido leh video diinta - Iyada oo taageero qaab ballaaran, Converter MTS ka badalo kartaa file AVCHD MTS in AVI, MP4, MKV, wmv, MOV, FLV oo kale qaab video, qeybsanaan;
Kubad xawaare diinta si degdeg ah - Waxay bixisaa 5x dhakhso xawaaraha diinta ay ka faa'iidaysanaya buuxa ee processor isticmaalaya NVIDIA ® CUDA TM teknoolajiyada;
Qalabka taageerada - presets filaayo in la siiyo qalabka la qaadi karo ay ka mid yihiin Apple iPhone / iPad / iPod, Sony PSP / PS3, telefoonada gacanta oo kale HTC, Motorola, BlackBerry iwm .;
In kor loo qaado videos hawlo edit - Waxaad noola clips video, midowdo dhowr files MTS mid, ku dar watermarks kuu gaar ah (text / image), dalban saamaynta video si aad u hagaajisid madadaalada.
Sida loo Beddelaan BDMV in AVI, MP4, MOV iwm , Maqaalkani waxa uu kuu ogolaanayaa inaad badalo BDMV files si AVI, MP4, MOV iyo ku dhawaad ​​kasta oo kale oo caan ah, heerka qaabab video la weyn BDMV video Converter.
Waa maxay MTS File : Haddii aadan aqoon oo ku saabsan qaab MTS, qodobkan ku sharixi doonaa waxa uu yahay files MTS si faahfaahsan iyo bandhigno aqoon kale oo qaraabo ah.
Beddelaan Panasonic MTS M2TS Files in qaab kasta oo : Haddii aad u badan oo cajallado aad fiidiyo Panasonic, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad iyaga ugu badalo dheeraad ah. Just la qasabno yar oo sahlan, oo aad si qaab kasta oo aad rabto in aad loogu badalo kartaa files Panasonic in video tayo aad u sarreeya.
Beddelaan Canon MTS M2TS Files in qaab kasta oo : files Canon MTS M2TS aan si toos ah u ciyaaray karaa ugu codsiyada ama qalab. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ballaaran loo isticmaali files kuwaas, waxaad baran kartaa sida loo badalo files Canon M2TS / MTS in ay qaab ama qalab kasta oo si fudud.